ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: ကျွန်မ ညီမလေးရဲ့ မင်းအကြောင်း မဟုတ်တဲ့ကဗျာ
စာရေးသူ: s0wha1 Labels: Poems, ကူးယူးဖော်ပြခြင်း
ကျွန်မ ဒီနေ့တော့ စောစောအိပ်ချင်တာနဲ့ ကျွန်မညီမလေးရဲ့ တစ်ပုဒ်တည်းသော ကဗျာလေးကိုပဲ တင်လိုက်ပါတယ်... ခံစားပေးကြပါဦး...
ငါဒီနေ့ လူတစ်ယောက်ကို ခင်းကျင်းပြသဖို့ အတွေးတွေကို လိုက်ဖမ်းနေခဲ့တယ်...
တခါတလေ လွတ်ထွက်သွားလို့ ပြန်လိုက်ကောက်တယ်...
ဒါပေမယ့် တချို့ ဖိတ်ကျန်ခဲ့တယ်...
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပေးတာရဲ့ထိုက်တန်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုကိုမရခဲ့တော့...
ဘယ်တော့မှ ပြန်လှည့်မကြည့်ခြင်းတွေနဲ့အတူ မြစ်နဲ့ဝေးရာကို ထွက်သွားခဲ့တယ်...
ကိုယ့်ရဲ့ စွဲလမ်းခြင်းတွေ၊ သတိရခြင်းတွေကတော့ မြစ်ရိုးတလျှောက် ကျန်ရစ်ခဲ့လေရဲ့...
ငါဟာ ဘာမှမက်မောစရာမကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ...
ငါ့ဆီမှာ အစိမ်းရောင်ဆံပင်လို အတွေးတွေရယ်၊ အဖြူသက်သက် ရူးသွပ်မှုတွေရယ်
မင်းကငါ့ဆီက ဘယ်အရာကိုများ စွဲလန်းမက်မောနေတာလဲ ???
ရေးပြီးချိန်: 6/06/2007 12:01:00 AM
ရှားငယ်ကိုပါ ဘလော့ဂ်ရေးဖို့ မြှောက်ပေးဦးမှ .. :D
ညီအမတွေကတော့ တယ်လဲ ဟုတ်နေကြပါလား။ စာပေ၀ါသနာတူ ညီအမဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့နော်။ ကိုသံလွင်ပြောသလိုပဲ ရှားငယ်ကိုပါ ဘလော့ရေးဖို့ တိုက်တွန်းပါလား။ တခုတော့ရှိတယ် … ဒါဆိုရင် သူ့ကဗျာတွေ ညီမလေး ယူသုံးလို့ ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူးနော် …. ။
ကိုကြီးရေ သူက ရွှေပုံပေးတောင် ဘလော့ဂ် မလုပ်ဘူးတဲ့...
June 6, 2007 at 6:58 PM
ဒီကဗျာလေးကို သိပ်ကြိုက်တာပဲ ။ ခံစားချက်တွေ သွားတူနေတယ် ။ ဆိုးဝှက်ညီမလေးကိုပြောလိုက်ပါ.. ဒီကဗျာလေးရော သူ့ ကလောင်နာမည်လေးရော ကြိုက်တယ်လို့ ။
December 25, 2007 at 6:40 PM